Olee otú mmekọrịta dị n'etiti ngalaba aha na SEO dị mkpa?
Dị ka ihe atọ kachasị mkpa nke Google si dị, njirimara nke ebe nrụọrụ weebụ, njirimara ọdịnaya, na folda nkwado bụ ihe kacha emetụta iji chọpụta ma a ga-ahọrọ ya n'elu SERPs, ma ọ bụ. Na nke ahụ bụ eziokwu, na-atụle òkè ọdụm nke ndị ahịa gị nwere ike ịnweta nleta mbụ ha na ibe weebụ gị si na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu.
N'ihi ya, ezigbo aha ngalaba na SEO mmezi nwere ike ịkpọ flagships nke ma eleghị anya na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. N'ịtụle ọ bụla aha ngalaba aha iche iche, ọ na-emekarị ka ọ bụrụ aha aha ụlọ ọrụ ahụ, kwadoro ya na okwu ndị dị mkpa ma dị mkpa na mkpirisi okwu. Ma ajụjụ banyere mmekọrịta dị n'etiti ngalaba aha na SEO mmetụta na ọkwa Google ka abụtụla isiokwu dị mwute. A sị ka e kwuwe, è nwere ihe àmà ọ bụla maka njikọ dị n'etiti ngalaba aha na SEO? Ọ bụ ya mere m ji kpebie ịchọta isi ihe na-achịkọta ma kwadoro ihe ụfọdụ dị na ala.
Ọ dịghị iwu doro anya
N'eziokwu, ihe ndị dị na Google enweghị ụkpụrụ nduzi ọ bụla ma ọ bụ ihe gbasara iwu nke anyị ga-aghọta nzọụkwụ site na nzọụkwụ. N'ụzọ doro anya, nnukwu ụlọ ọrụ na-eme ihe kachasị mma iji gbochie mmebi ọ bụla ma ọ bụ ịghọ aghụghọ ule, Ma otu ihe nwere ike ijide n'aka - dị ka ọtụtụ n'ime ule a na-eme, ihe dị ka narị abụọ dị iche iche ihe dị na algorithm ikpeazụ iji chọpụta ogo ogo weebụ na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ engine. N'ịtụle ụfọdụ ihe ọmụma bara uru site n'aka ndị ọrụ mbụ, yana ndị ọzọ chepụtara na echiche ndị ezi uche dị na ya, e nwere ụfọdụ ihe nwere ike ịpụta site n'ịchịkọta ngalaba aha na SEO mmezi na-abịa na ya.
Tụlee ndị ọrụ ndụ, ọ bụghị nchịkọta ọchụchọ
N'ezie, nhọrọ nchịkwa nhọrọ ziri ezi bụ nzọụkwụ dị oke mkpa na-eme ka ụzọ gị gaa n'ịntanetị na-aga n'ihu. Na m nwere ike ikwu ebe a iji nweta aha-enyi-enyi na ngalaba aha mbụ. Ọ dịghị mkpa ka ị gbalịa ịmegharị ihe na njirimara search engines. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche banyere ezigbo ndị ọrụ, ya mere, m na-atụ aro ka a chịkọtara ya, na-enyocha anya na aha na-echefu echefu, nke ga-abụ ihe dị mkpa na nke a na-ahụta ebe a. Enweghi ike itinye ya na aha ahia gị, nakwa yana isiokwu dị mma na njikọta ha.
Na-ele anya n'azụ, ngalaba aha gụnyere isiokwu ziri ezi eji mee ihe dị iche karịa ihe ndị fọdụrụ ndị asọmpi na nsonaazụ ọchụchọ Google. Oge ndị ahụ agafeela ogologo oge gara aga, ebe ọbụla na-achịkwa ngalaba nke isiokwu ndị a ugbu a. Ugbu a, engines ọchụchọ na-enwe mmasị na weebụsaịtị ndị ahụ na-enye ndị ọzọ uru karị, i. e. , inwe ọdịnaya dị mma karị. Ma mgbagha mbụ nke ngalaba ngalaba ka na-arụ ọrụ, dị ka isi okwu ndị dị na ngalaba aha ahụ bụ ndị enyi na-eme ka ndị ọbịa nwee njikọ n'etiti ajụjụ nyocha ọchụchọ na ibe weebụ.Ọ bụghị ịsị na URL ndị dị otú ahụ ga-aba uru karị maka ịkekọrịta, wee nwee mmetụta dị mma maka ntinye ọnụ-ọnụ gị. Ime otú ahụ, ị ​​nwere ike ịgba Gọọmenti ume ka ị nweta ụlọ ọrụ weebụ gị na ọkwa dị elu. Ya mere, ọ dịtụghị mgbe ị na-eme nchọpụta nchịkọta okwu mgbe ị na-ahọpụta aha ọhụrụ gị. Ị gaghị akwa ụta, ejiri m n'aka Source .